MB 2015 septambra | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Mandra-pahatongan'ny fiatrehantsika haizina, manamaivana ny ankamaroantsika isika. Na izany aza, tsy misy zavatra tsy hita raha tsy misy ny mazava. Tsy mahita afa-tsy zavatra isika rehefa manazava efitrano iray ny hazavana. Aiza no ahatongavan'ity zavatra ity ny mason-tsika optika ary mamorona famantarana iray izay mamela ny atidohantsika ho fantatra ho zavatra eny amin'ny habakabaka misy endrika, toerana sy fihetsika manokana. Ny fahalalana ny fahazoan'ny mazava dia sarotra. Ny siansa tany aloha dia tsy azo inoana fa naka zezika toy ny onja, avy eo toy ny onja. Ankehitriny ny ankamaroan'ny fizika dia mahatakatra hazavana toy ny sombin-onja. Mariho izay nosoratan'i Einstein: Toa tsy maintsy mampiasa ny iray ary indraindray ny teoria hafa, raha afaka mampiasa roa isika. Miatrika karazana tsy takatra vaovao isika. Manana sary roa mifanohitra izahay. Amiko manokana, tsy misy afaka manazava tsara ny fisehon'ny mazava fa miaraka izy ireo.
Ny lafiny iray mahaliana momba ny toetran'ny mazava dia ny antony mahatonga ny maizina tsy hanana fahefana amin'izany. Mifanohitra amin'izany, raha ny mazava manala ny haizina dia tsy milamina izany. Ity toe-javatra ity dia aseho ao amin'ny Soratra Masina, mikasika ny toetran'Andriamanitra (ny mazava) ary ilay ratsy (an'ny haizina na maizina), andraikitra manaitra. Mariho izay nolazain’ny apostoly Jaona ao amin’ny 1 Jaona 1,5: 7 (HFA) nanoratra hoe: Ity no hafatra efa renay tamin'i Kristy ary ambaranay aminao: Andriamanitra dia mazava. Tsy misy aizina. Ka raha milaza isika fa an’Andriamanitra ary mbola miaina ao anatin’ny haizin’ny ota, dia mandainga sy manohitra ny fahamarinana amin’ny fiainantsika isika. Raha miaina ny fahazavan'Andriamanitra anefa isika, dia mifandray eo amin'ny tsirairay avy. Ary ny ra nalatsak’i Jesosy Kristy zanany ho antsika dia manafaka antsika amin’ny fanamelohana rehetra.
Sahala amin'i Thomas F. Torrance ao amin'ny bokiny Trinitarian Faith (Trinité Finoana), Athanasius, mpitarika ny fiangonana tany am-piandohana, manaraka ny fampianaran'i Jaona sy ny Urapostles hafa, dia nanambara ny fahazavana sy ny tara-pahazavana mba hilazana ny toetran'Andriamanitra izay nambara tamin'i Jesosy Kristy: tahaka ny mazava na dia tsy misy ny fanomezany aza, ny ray dia tsy misy zanany ary tsy misy teniny. Ankoatr'izay, toy ny hazavana sy ny hazavana dia iray ihany ary tsy mifanalavitra, dia ny iray sy ny ray dia iray sy tsy mifankahala, fa iray ihany ary iray ihany. Tahaka ny fahazavana mandrakizay mandrakizay Andriamanitra, dia toy izany koa ny Zanak'Andriamanitra amin'ny fahazavana maharitra mandrakizay, tsy misy fiandohana sy fiafarana (Pejy 121).
Athanasius dia namolavola teboka manan-danja izay naseho azy sy ireo tompon'andraikitra hafa tao amin'ny fiangonana tao amin'ny Nicene Creed: Jesosy Kristy dia mizara ny iray amin'ny Ray (Grika = ousia) Andriamanitra. Raha tsy izany dia tsy nisy dikany raha tsy nanambara i Jesosy hoe: "Izay nahita ahy dia nahita ny rainy" (Jaona 14,9). Tahaka ny nanamarihan'i Torrance raha tsy tena mitovy i Jesosy (iray ousia) miaraka amin'ny rainy (ary amin'izany dia Andriamanitra tanteraka), tsy hanana fanambarana feno ananan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy isika. Saingy raha nanambara i Jesosy fa izy tokoa dia io fanambarana io dia midika hoe mahita azy, mahita an-drainy, maheno azy dia midika hoe maheno ny ray tahaka ny tenany. Jesosy Kristy dia Zanak'ilay Ray amin'ny endriny tena izy, izany hoe amin'ny maha zava-misy sy toetrany tena izy. Ny filazan'i Torrance ao amin'ny "Trinitie Finoana" ao amin'ny pejy faha-119: ny fifandraisan'ny ray-zanakalahy dia lavorary sy tonga lafatra eo amin'ny tsirairay avy amin'ny maha-Andriamanitra, izay mandrakizay ary misy koa ho an'ny ray sy ny zanaka. Andriamanitra dia ray tahaka ny rain'ny zanakalahy mandrakizay ary ny maha-zanak'Andriamanitra dia andriamanitra araka ny maha-zanak'Andriamanitra azy mandrakizay. Misy fahatokiana tonga lafatra sy maharitra eo amin'ny ray sy ny zanaka, tsy misy "elanelana" ao anatiny.
Satria ny ray sy ny zanaka dia iray ihany, dia iray ihany koa izy ireo amin'ny fanaovana (Action). Mariho izay nosoratan'i Torrance ao amin'ny Fotopampianaran'ny Kristianisma Kristiana: Misy fifandraisan'ny tsy misy ifandraisany eo amin'ny Zanaka sy ny Ray, ary io fifandraisana io dia noforonina indray mandeha ary ho an'ny rehetra eo amin'ny fiainantsika olombelona ao amin'i Jesoa Kristy. Ka tsy misy Andriamanitra ao ambadiky Jesosy Kristy, fa io Andriamanitra io, izay ahitantsika ny tavan'i Jesosy Tompo. Tsy misy andriamanitra tsy marim-pototra, andriamanitra tsy fantatsika, fa afaka mihorohoro miaraka ihany isika rehefa mandefitra ny feon'ny fieritreretantsika diso.
Io fahatakarana ny natiora io dia nambara tamintsika ao amin'i Jesoa Kristy (Fahasoavan'Andriamanitra) dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fizotran'ny fomba ofisialy ny kanona amin'ny Testamenta Vaovao. Tsy misy boky azo raisina ho tafiditra ao amin'ny Testamenta Vaovao raha tsy mitandrina ny firaisan'ny ray sy ny zanakalahy. Ka io fahamarinana sy zava-misy io no tena lasa mpandika teny (izany hoe ny hermeneutic) fahamarinana fototra izay namaritana ny votoatin'ny Testamenta Vaovao ho an'ny Fiangonana. Amin'ny fahafantarana hoe ny ray sy ny zanaka (anisan'izany ny saina) dia iray ao amin'ny natiora sy ny hetsika, manampy antsika hahatakatra ny toetry ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia tsy zavatra noforonin'Andriamanitra hijanona eo anelanelan'Andriamanitra sy ny olona, ​​fa raha ny filazan'i Torrance azy dia "Andriamanitra dia manome antsika antsika amin'ny Zanany izay tonga nofo, ka ny fanomezana sy ny mpanome dia Andriamanitra tsy manam-paharoa." Ny maha-lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy dia Jesosy Kristy, satria avy amin'ny alalany sy avy aminy ny famonjena.
Andriamanitra Triune, ilay Fahazavana Mandrakizay, no loharanon'ny "fahazavana rehetra", na ara-batana na ara-panahy. Ny ray izay niantso ny fahazavana dia nandefa ny zanany ho fahazavan'izao tontolo izao, ary ny ray sy ny zanakalahy dia nandefa ny Fanahy hitondra fahazavana ho an'ny olona rehetra. Na dia «ao anaty hazavana tsy mety takona aza Andriamanitra» (1 Tim. 6,16) dia naneho ny tenany tamintsika Izy tamin'ny alàlan'ny fanahiny, ao amin'ny "tarehin'i" Jesosy Kristy zanany nofo. (jereo ny 2 Korintiana 4,6). Na dia mila miahiahy aza isika amin'ny voalohany mba "hahita" io fahazavana be loatra io, ireo izay mandray izany dia tsy ho ela dia nahatsapa fa niparitaka lavitra be ny haizina.
Ao amin'ny hafanan'ny hazavana
Ny toetran'ny fahazavana, Andriamanitra sy fahasoavana